रातमा सुत्नु अघि दूध किन पिउने ? यसो भन्छ नयाँ अनुसन्धानले « Sansar News
रातमा सुत्नु अघि दूध किन पिउने ? यसो भन्छ नयाँ अनुसन्धानले
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०९:२४
अक्सर राती सुत्नुअघि पहिले मनतातो दूध पिउन सल्लाह दिने गरिन्छ । यसका धेरै कारणहरु छन्। वैज्ञानिकहरुले राती दूध पिउनुको नयाँ कारण दिएका छन्। उनीहरु भन्छन्, यदि तपाइँ राम्रोसँग सुत्न चाहानुहुन्छ भने तपाई राती सुत्नुअघि मनतातो दूध पिउनुहोस्। यसबाट तपाई निद्रा नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
यो दाबी चीनको नेसनल नेचुरल साइन्स फाउन्डेसनको अनुसन्धानले अगाडि ल्याएको छ । शोधकर्ताहरु भन्छन्, यो अनुसन्धानमा साबित भएको छ कि मनतातो दूध पिउँदा अनिद्राको गुनासोबाट छुटकारा पाउन सक्छ।
कसरी दूधले अनिद्राबाट छुटकरा दिन्छ ?
शोधकर्ताहरुका अनुसार दुधमा ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड पाइन्छ। यस बाहेक, अनुसन्धानको दौरान नयाँ तथ्य पनि पत्ता लागेको छ कि दूधमा पेप्टाइड केसिन हाइड्रोलाइजेट पनि पाइन्छ, जसले तनाव कम गर्दछ र निद्रामा सुधार गर्दछ। एकसाथ यी दुई चीजहरु पाइने भएकाले दूधले अनिद्राको समस्या हटाउँछ ।
शोधकर्ता लिन झेंग भन्छन्, ‘हामी जान्न चाहन्छौं कि दूध र निद्राको बीच कुनै सम्बन्ध छ। अनुसन्धानको क्रममा मुसाको निद्रा परीक्षण गरिएको थियो। यो रिपोर्टमा पाईएको छ कि दूधमा पाइने दूध पेप्टाइड्सको केहि प्रकारले निद्रालाई प्रेरित गर्नमा मद्दद गर्दछ।’
मुटु रोगको जोखिमलाई कम गर्दछ ?
इंग्लैंडको यूनिभर्सिटी अफ रिड्गिका शोधकर्ताहरुका अनुसार यदि तपाइँ मुटुरोग र स्ट्रोकको जोखिम १४ प्रतिशतले घटाउन चाहानुहुन्छ भने दैनिक एक गिलास दुध पिउनुहोस्। दैनिक एक गिलास दुध पिउनेहरुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम रहन्छ। यसैले मुटु रोगको जोखिम कम छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढेपछि धमनीहरुमा अवरोधहरु बन्छन्। फलस्वरूप, हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम बढ्छ।
के दुध पिउनाले मधुमेह को खतरा बढ्छ ?
मानिसहरुमा यो विश्वास छ कि दुध पिउनाले मधुमेहको खतरा बढ्छ, तर नयाँ अनुसन्धानमा शोधकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् कि धेरै वा कम दूध पिउनाले मधुमेहको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। दूध हड्डीको लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ र भिटामिन र प्रोटीनको कमीलाई पनि पूरा गर्दछ।
दूध कस्तो पिउने त्यो तपाइँको सुविधा अनुसार छनौट गर्नसक्नुहुन्छ ।
गाईको दुधमा अन्य दूधमा भन्दा धेरै क्याल्सियम हुन्छ । गाईको शुद्ध दुधमा ८८ प्रतिशत पानी र प्रोटिन, राम्रो बोसो र भिटामिन-डी को उच्च मात्रा हुन्छ। क्याल्सियम यसमा अन्य दूधमा भन्दा बढी पाईन्छ। ओमेगा -3 फैटी एसिड पाइने कारण, यो मुटु र मधुमेह रोगीहरुको लागी विशेष गरी फाइदाजनकछ। यो धेरै अनुसन्धानमा देखिएको छ की मेटाबॉलिज्म दुरुस्त राख्नुका साथै यसले ब्लड शुगर लेवललाई नियन्त्रण गर्दछ ।
यदि तपाइँ दूधबाट एलर्जी हुनुहुन्छ, यसलाई लिनुहोस्, यसमा प्रोटीन को मात्रा अधिक छ। जो मानिसहलाई दूधबाट एलर्जी छ सोया दूध लिन सक्छन्। यसमा प्रोटीन उच्च हुनुको अलावा, क्याल्सियम र फलाम पनि उच्च हुन्छ। यसमा नौ प्रकारका एमिनो एसिड पाइन्छन्, जसले प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ, जसले रोगहरुसंग लड्ने क्षमता बढाउँछ। यो पिउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि धेरै चिनी नलिनुहोस्।
यसमा पोषक तत्व धेरै मात्रामा पाइन्छ। यसमा भिटामिन सी, ई, बी र फलाम, सोडियम, म्याग्नेशियम, फास्फोरस यसमा फाइबरको उच्च मात्रा पाइन्छ। ल्याक्टोज मुक्त भएको हुनाले, यो दूधबाट एलर्जी भएका मानिसहरुले पनि लिन सक्छन् । कम कोलेस्टेरोल भएका कारण यसले मुटु सम्बन्धी रोगहरुबाट बचाउँछ।
यदि तपाइँ बढ्दो कोलेस्ट्रोल र रक्तचापबाट हैरान हुनुहुन्छ, यसलाई आहारमा समावेश गर्नुहोस्। स्किम्ड दूध एक राम्रो विकल्प हो। विशेष गरी ३५ बर्षको उमेर पछि यो दूध पिउनु राम्रो हुन्छ। फ्याट मात्र ३ प्रतिशत छ, त्यसैले यदि तपाइँ तौल घटाउन चाहानुहुन्छ, तब तपाइँ यसलाई आहारमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो दही वा महिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
यो कम बोसो भएको दूधले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउँछ । जो तौल घटाउन चाहँदैनन्, मात्र फिट रहन चाहन्छन्, उनीहरु डबल टोन दूध पिउन सक्छन्। यसमा चिल्लोपना कम हुन्छ । यसमा बोसोको मात्राको कम भएका कारण, हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम पनि कम हुन्छ। यसमा भिटामिन डी को मात्र पनि उच्च हुन्छ, जसको कारण क्याल्सियम सजिलैसंग शरीरले पचाउँछ ।एजेन्सी
ओमिक्रोन सङ्क्रमण भएको छ कि छैन कसरी थाहा…
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ-यसकारण जरुरी छ गर्भवती महिलाले कोरोनाविरुद्धको…